भर्खरै सकियो नेकपा हाइकमाण्ड बैठक, एमसीसीबारे के भयो निर्णय ? — Imandarmedia.com
भर्खरै सकियो नेकपा हाइकमाण्ड बैठक, एमसीसीबारे के भयो निर्णय ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा एमसिसीको विषयमा छलफल भएको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठक अनौपचारिक भएकाले कुनै ठोस निर्णय भने भएन ।
बैठकमा एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरू तथा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका एमडी र एमसिसी नेपालका सिइओले एमसिसीबारे आ–आफ्नो ब्रिफिङ राखेका थिए । यसैगरी एमसिसीलाई पार्टीभित्र प्रश्न उठाउने नेताहरू देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले पनि बैठकमा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
केही समययता थाती रहेको एमसिसी मुद्दा नेकपामा फेरि उठेको छ । संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुँदा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषयलाई एमसीसी पछाडिको ढोकाबाट ल्याउन खोजेको भन्दै नेकपामा विरोध भएको छ ।
पार्टीको अध्ययन कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न नहुने बताएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली जतिसक्दो चाँडो एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदनको पक्षमा रहेका छन् । बैठकमा संविधान संसोधनको बिषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
यसैबीच संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा अलमल देखिएको छ । निसान छापमा लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा राख्न सरकारले शुक्रबार दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावबारे जसपाले धारणा बनाउन सकेको छैन ।